Gbasara Anyị - LifeBogger (Akụkọ Footballmụaka Akụkọ gbasara nwata na akụkọ ndụ ya)
Mmadụ Bịa ka LifeBogger! Oflọ nke Ezi Akụkọ Akụkọ .gba Ọgba.
Ndị ọkachamara n’egwuregwu bọọlụ, ndị na-ahụ maka bọl na ndị na-ahụ maka egwuregwu niile enwetala Akụkọ nwata. LifeBogger weghaara oge ndị a na-agaghị echefu echefu ma na-atọ ụtọ ma na-emetụ aka.
Ngwá ọrụ anyị na-enye akụkọ kachasị dị ịtụnanya, ihe ịtụnanya na nke na-adọrọ mmasị na Akụkọ ndụ nke ndị na-agba ụkwụ (nke nọ n'ọrụ / ndị lara ezumike nká), ndị na-ahụ maka bọl na ụmụ oke. Anyị na-ekpuchi ihe ndị a ma ama site na nwata ha ruo mgbe a bịara mara ha nke ọma.
Ọ bụ ihe ịtụnanya ịhụ etu ndị na-agba bọọlụ, ndị njikwa na ndị etolite si etolite site na ụmụaka mara mma rue ndị ọkachamara. Ebumnuche anyị bụ ka anyị lekwasị anya n'ihe omume ndị mere na ndụ ndị a, ihe mechara bụrụ na uche ha mechara.
Anyị Mission: Iji bụrụ isi mmalite dijitalụ maka akụkọ nwata na akụkọ ndụ ndị egwuregwu bọọlụ.
LifeBogger na-agba mbọ ịnọ n'etiti ndị egwuregwu bọọlụ dị n'ịntanetị nke 'kacha mma' maka akụkọ nwata na akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu nke ndị egwuregwu (ma ndị nọ n'ọrụ ma ndị lara ezumike nka), ndị njikwa na ndị egwuregwu bọọlụ.
N'ime nke ahụ, anyị na-ahụ maka inye ndị na - agụ akwụkwọ anyị kpọrọ ihe ndụmọdụ nke ọdịnaya (uru adịchaghị) nke ga-eme ka ha laghachite maka ihe ndị ọzọ.
Isiokwu anyị nwere nyocha zuru oke nke ndị na-agba bọọlụ / ndị njikwa / mbido ndụ ha, mmalite ezinụlọ, ndụ mbido, ụzọ / ịrị elu na ama akụkọ ndụ, ndụ ezinụlọ, mmekọrịta mmekọrịta, ndụ onwe onye, ​​ụdị ndụ ya na eziokwu ndị a na-apụghị ịgụta ọnụ.
Ebumnuche anyị: Iji mepụta ma dozie ebe nchekwa dijitalụ maka ndị na-agba bọọlụ.
A na-eme atụmatụ na ihe karịrị ọkara nke ndị bi n'ụwa na-ewere onwe ha dị ka ndị na-eso ụzọ bọl (bọl) ma ọ bụ ndị na-eme egwuregwu. Nke a na-egosi na nde mmadụ anọ na ụwa na-ele bọl nke bụ egwuregwu kachasị ewu ewu n'ụwa.
Ọ bụ ezie na anyị anaghị eme egwuregwu na-agbasa ozi ọma ma ọ bụ na-enye akara ọhụụ ma ọ bụ kacha elu 10s, ebumnuche anyị bụ ijigide akụkọ nwata na ụmụaka na-edekọ akụkọ banyere onye ọ bụla.
Oge egwuregwu nwata anyị na akụkọ ndụ anyị nwere olile anya inye ndị bọọlụ bọọlụ ozi gbasara ndị egwuregwu ha na-enwe ọ forụ maka egwuregwu ọ bụla na TV. N'ihi ya, ọ bụghị naanị ilele bọlbụ mana ịgụ ya.
Valkpụrụ Anyị: Ọdịnaya nke Ogo.
Ọdịnaya Dị Mma: LifeBogger na-agba mbọ ịnye ọdịnaya pụtara ìhè nke na-eburu ndị hụrụ bọọlụ n'anya n'ụwa niile uru.
Mmasị: Anyị kwenyere na Football (Soccer) jikọtara na agụụ, mmetụta, mkpali na ntinye obi. N'ihi ya, anyị na-eweta oke agụụ ide akụkọ akụkọ nwata na Akuko Untold Biography.